Apple Kuona uye Chiitiko, makiyi ekuzvinzwisisa | IPhone nhau
louis padilla | | Apple Watch, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple Watch yaive mambo wekutenga paKisimusi sezvo isu takakwanisa kuverenga mumishumo yevamwe vaongorori vane zvinopfuura mamirioni mashanu mayuniti akatengeswa. Iwo matsva mamodheru, kudonha kwemitengo uchienzaniswa nekuvhurwa kwemhando yekutanga, huwandu hwakawanda hwekupedzisa, mavara uye tambo ... Izvo pasina mubvunzo zvave mareferenzi emawatchwatches nevashandisi vazhinji vakamboshandisa nyore nyore kuenzanisa bracelet ikozvino Vane vakasarudza kushandisa Apple Watch, iyo mukuwedzera kune zvese izvo yavo bracelet yakaita inopa zvakawanda zvimwe sarudzo. Asi pane chimwe chinhu chinovhiringidza vashandisi vazhinji uye ndiyo nzira iyo iyo Apple Watch inoyera yako chiitiko chemuviri. Isu tinotsanangura makiyi kuti tinzwisise.
Tinotanga nechimwe chezviziviso chinonyanya kutsamwisa vazhinji: Simuka. Ichokwadi kurudziro yatove nemakore akati wandei uye inotsigirwa neakawanda ezvesainzi zvidzidzo. Kufamba kweinenge maminetsi mashanu awa yega yega kune hutano uye kunodzivirira hutachiona hwehutachiona hweshuga. Asi pamwe dambudziko riri paApple chaicho chiziviso: Izvo hazvisi zvekumira asi zvekuita chimwe chiitiko awa yega, hongu, kushoma. Iyo ziviso inouyawo pamberi pekupera kweawa, kuitira kuti utore poindi yeiyo nguva. Kana iwe ukawana iwo gumi nemaviri mapoinzi ezuva iwe unenge wazadza rin'i.
Iyo ingangoita iyo poindi inogadzira kusagadzikana kukuru. Chii chinonzi Apple kufunga nezve kurovedza muviri? Iyo kambani inozvitsanangura sechiitiko chero chipi zvacho chinoisa kumbomira mumuviri wako, senge kufamba nekukurumidza. Iyo Apple Watch inoongororawo kufamba kwako, kurova kwemoyo uye Iko kuita kwaunoita kunofanirwa kuve nekukanganisa pamwoyo wako weApple kuti uzvione sechiitwa zvikasadaro hazvizozviverenge. Saka kuita chiitiko chimwe chete vanhu vaviri vanogona kuwana mhedzisiro dzakasiyana paApple Watch, zvinoenderana nekuedza kuri kuita kune yega.
Pakupedzisira tinouya kumhete iyo inokodzera macalorie atakashandisa. Sezvakangoita yapfuura, iyo Apple Watch inoshandisa kufamba uye moyo maseru sensors kuyera macalorie aunodya, asi chete "Anoshanda MaCalori". Apple inotaura nezve "Simba mukuita" kureva macalorie ari iwo anoshandiswa patinoita chiitiko chemuviri. Kune zvakare "Basal Calories" kana "Energy pazororo" zvinova izvo zvatinodya pachinhu chakareruka chekurarama kuburikidza nenzira dzakakosha sekufema. Iwo macalorie ese atinodya ndiwo mhedzisiro yeaya maviri, asi mhete yekufambisa inongoreva izvo zvinoshanda.
Ichi chinongedzo chekufambisa ndicho chega chatinogona kuchinjira kune zvatinodaPamwe panguva yekutanga kumisikidzwa kweApple Watch kana chero nguva uchishandisa iyo Force Kubata kubva mukati meChiitiko app yeiyo wachi. Pamusoro pekutsanangura chinangwa chedu chemacalorie ekudya (rangarira kuti iwo "anongoshanda" chete) tinogona kuona pfupiso yevhiki nevhiki yechiitiko chedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Apple Kuona uye Chiitiko, makiyi ekuzvinzwisisa
Zvino, asi kana ini ndichida kumhanya kana kufamba kweawa rimwe pane maminitsi makumi matatu, ndinozvigadzirisa sei pane wachi yeapuro?
Toca Chitoro, yemahara kwenguva shoma
Iyo iPhone 8 ine yakajeka OLED skrini ndiyo imwe pfungwa inosvika kunetiweki